ဆွေးနွေးချက်:သောမတ်စ် ဂျက်ဖာဆင် - ဝီကီပီးဒီးယား
Hello, I believe ထောမတ် would sound closer to the actual English pronunciation. "Th" in Thomas is like "Th" in Thai. I propose that we change all the articles that start with Thomas from သောမတ် to ထောမတ်. Hybernator ၂၁:၄၈၊ ၄ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
ဒီအတိုင်း ထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အများသိကြတဲ့ အသံထွက်က သောမတ်ပါ။ အဲဒီတော့ ရှာတဲ့သူကလည်း သောမတ်လို့ပဲ ရှာကြမှာပါ။ ဂျက်ဆင် လုပ်သလို မြန်မာသံ ဖလှယ်တယ် လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ကြတာပေါ့။ :) Zawthet ၀၂:၀၈၊ ၅ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
Hybernator ပြောတာက မှန်တော့မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာစာပေမှာ အသုံးများလာခဲ့တဲ့ အသံထွက်အရေးအသားက သောမတ် ဖြစ်လို့ သောမတ်ကိုပဲ အတည်ပြု ထားပေးစေလိုပါတယ်။ သုတေသီ ၀၂:၅၀၊ ၅ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
Thank you, Ko Zaw Thet and Researcher for your feedback. Fair enough, I guess. But couldn't we redirect from သောမတ် to ထောမတ်? Otherwise, we're just perpetuatingabadly transliterated sound from ages ago in the new medium and in the new millennium. (Btw, ဂျက်ဆင် is fine/close enough.) I'm not proposing that we change every translated word to sound as close to English. Not at all. It's impossible. But when there are *blatantly wrong* sounds like သောမတ်, I'd like the Burmese Wiki not to perpetuate them. But I do see your point, and would like to hear what others think too. I'd defer to the Burmese Wiki team's opinion here. (Btw, keep up the good work. Hope you reach your 15k-article goal by June.) Best regards, Hybernator ၀၂:၅၆၊ ၅ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
ကိုဇော်သက်အခုလိုရှည်ရှည်ဝေးဝေးလေး ရှင်းပြတော့ ဝီကီအပေါ်ရော နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေအပေါ်ရော ထားရှိတဲ့ ကိုဇော်သက်ရဲ့ စေတနာကို လေးစားဂုဏ်မိယူပါတယ်။ ကိုဇော်သက်ပြောသလို Redirect ပေးပြီး ထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်မြတ်ပါတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း အဲဒီ နာမည်အသံထွက် ကွဲလွဲနေမှုကိစ္စကို ဆောင်းပါးရဲ့ ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်မှာ ရှေးယခင်က အများခေါ်ဝေါ်နေကြတာကဘယ်လို၊ အသံထွက်အမှန်က ဘယ်လိုဖြစ်သင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်ဗျား။ သုတေသီ ၀၆:၀၀၊ ၅ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
အပေါ်က ရှင်းသွားတာ ကျွန်တော် မဟုတ်ပါ။ Hybernator ဖြစ်ပါကြောင်း။ :D Zawthet ၀၉:၀၅၊ ၅ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
အာ၊ ဟုတ်သားပဲ၊ မှားသွားတယ်၊ ဆောရီးဆောရီး။သုတေသီ ၀၉:၁၅၊ ၅ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
Thanks. I like Ko Thutaythi's suggestion to state "ရှေးယခင်က အများခေါ်ဝေါ်". But let's wait forafew others to provide their take. In the mean time, I've rewritten the lead with (တခြား အသံထွက်။ ထောမတ်စ် ဂျက်ဖာဆင်) asacompromise. I'd still like to REDIRECT it to ထောမတ်စ် ဂျက်ဖာဆင်. For those of us who have been fortunate enough to have been abroad should try to help our fellow countrymen become more familiarized with other (more standard) English pronunciations (rather than our native Burmese English pronunciations). Of course, there'salimit to what we can do. Some prevailing names like (ကနေဒါ for Canada) are so entrenched in our usage that I won't suggest to change it to anything else even though ကနေဒါ is quiteabit off. But foralot of other English words that aren't quite established as ကနေဒါ, we might be able to help disseminate more accurate translations. And I believe the Myanmar Wikipedia is the right vehicle to achieve that goal. Regards, Hybernator ၁၆:၄၂၊ ၅ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၀ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွေးနွေးချက်:သောမတ်စ်_ဂျက်ဖာဆင်&oldid=85717" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဇွန် ၂၀၁၁၊ ၁၇:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။